Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Meelaha ugu wanaagsan caasimadda adduunka ee loogu talagalay dalxiisayaasha Mareykanka
Airlines • Airport • Aviation • Wararka Baxrayn • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Faransiiska • Wararka Hindiya • Indho Indho Indoneesiya • Wararka Kuweyt Kuweyt • Wararka Jabhada Malta • Wararka Cumaan • Sacuudi Carabiya Warka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Wararka Imaaraadka Carabta
Meelaha ugu fiican ee magaalo-madaxda adduunka ee loo tago dalxiisayaasha Mareykanka.
Si loo go'aamiyo caasimadaha ugu wanaagsan in la booqdo fasaxa, khubarada safarka ayaa falanqeeyay 69 caasimadood oo horumarsan arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin qiimaha hoteelada iyo gaadiidka, saadaasha cimilada celceliska, iyo tirada soo jiidashada iyo makhaayadaha
Ankara, Turkey waa caasimadda ugu fiican qiimaha huteellada, iyadoo celcelis ahaan qiimihiisu yahay $ 45.74 habeenkiiba.
Luxembourg waxay leedahay gaadiid dadweyne oo lacag la’aan ah waana caasimadda ugu wanaagsan ee loo caleemo saaray gaadiidka adduunka.
Valletta, Malta waa labada magaalo ee ugu wanaagsan soo jiidashada (311 halkii KM halkii sq) iyo makhaayadaha (442.6 KM halkii sq).
Markay jiilaalku soo dhowaado, magaalooyinku waa meelaha ugu habboon ee loo aadi karo fasaxyada, oo ay ka buuxaan wax badan si loo sameeyo wax kasta oo cimilada ah.
Iyo socdaalayaasha rajaynaya inay ka baxsadaan USA hadda, iyada oo la qaaday xayiraadihii safarka, magaalooyinka waaweyn ee adduunka ayaa bixiya meesha ugu habboon ee fasaxa magaalada.
Laakiin waa kuwee caasimadaha ugu fiican dalxiisayaasha?
Si loo go'aamiyo caasimadaha ugu wanaagsan in la booqdo fasaxa, khubarada safarka ayaa falanqeeyay 69 caasimadood oo horumarsan arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin qiimaha hoteellada iyo gaadiidka, saadaasha cimilada celceliska, iyo tirada soo jiidashada iyo makhaayadaha.
Tobanka magaalo ee ugu wanaagsan dalxiisayaasha adduunka
Rank Magaalada Caasimadda ah Country Qiimaha celceliska huteelka ($) Celceliska Qiimaha Tigidhka Hal Jidka Gaadiidka Dadweynaha Deegaanka ($) Celceliska Heerkulka (darajooyinka c) Celceliska Roobabka Sanadka (mm) Tirada Soojiidashada Tirada Makhaayadaha Dhibcaha Wadarta
1 Valetta Malta $ 199.58 $ 2.37 18.80 427 190 270 6.74
3 New Delhi Hindiya $ 101.87 $ 0.40 25.00 700 2,875 12,409 6.06
6 Muscat Cumaan $ 210.66 $ 1.32 28.00 100 330 563 5.59
Valetta, Malta waxaa loo muujiyey inay tahay caasimadda ugu wanaagsan adduunka oo leh dhibco guud 6.74 marka loo eego 10, oo leh tirada ugu badan ee soo jiidashada iyo maqaayadaha ka baxsan dhammaan caasimadaha.
Abu Dhabi, oo ah caasimadda UAE, ayaa ku jirta kaalinta labaad iyadoo leh dhibco 6.24 marka loo eego 10. Celceliska heerkulka magaaladu wuxuu gaadhay 27.92 digrii celcelis ahaan roobkuna waa 42mm sanadkiiba, taasoo ka dhigaysa meeshan meel aad u fiican haddii aad tahay qorrax -doon.
New Delhi, India waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad iyadoo celcelis ahaan dhibcaha 6.06 ka mid ah 10, iyadoo heerkulka celceliskiisu kor u dhaafayo 25 digrii iyo 12,409 maqaayado oo laga dooran karo.
Bangkok, Thailand waa caasimadda ugu fiican heerkulka oo leh celcelis ahaan 26.6 digrii.
Qaahira, Masar ayaa leh roobabka ugu yar oo leh kaliya 18mm celcelis ahaan roobabka sannadkii.